Khelkudsansar.com | कुन टोलीको पोजिसन के ? नेपालले नेदरल्याण्ड्सलाई हरायो,अब के हुन्छ ?
कुन टोलीको पोजिसन के ? नेपालले नेदरल्याण्ड्सलाई हरायो,अब के हुन्छ ?
Posted on: August 16, 2016 | views: 320
काठमाडौं,साउन ३२ । नेपाली क्रिकेट टोलीले आइसीसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसीप अन्तर्गत चौथो चरणको दोस्रो खेलमा घरेलु टोली नेदरल्याण्ड्सलाई १९ रनले पराजित गर्‍यो । प्रतियोगितामा अपराजित डच टोलीलाई पराजित गर्दै नेपालले महत्वपूर्ण दुई अंक हासिल गर्‍यो । प्रतियोगिताको अंकतालिका हेर्दा प्रतियाोगिता अझै सकिइसकेको छैन । र नामिबिया र केन्यालाई छाडेर प्रतियोगिताका जुनसुकै टोलीपनि एक अर्कालाई हराउने क्षमता राख्छन् । यद्यपी नेदरल्याण्ड्सले केन्या, नामिविया र हङकङसँग खेल्न बाँकी छ भने नेपालले केन्या हङकङ र युएईसँग खेल्न बाँकी छ ।
सन् २०१७ को डिसेम्बरमा प्रतियोगिता सकिनेछ । यद्यपी आइसीसीले भनेको छ कि लिगका शीर्ष टोलीहरुले सन् २०१९ को विश्वकप छनौट खेल्न पाउनेछन् । तर उसले यो खुलाएको छैन कि कति टोलीले छनौट खेल्नेछन् । तर अपुष्ट समाचारहरुमा शीर्ष चार टोलीले विश्वकप छनौट खेल्नेछन् ।
प्रतियोगितामा सहभागी देशहरुको चौथो चरणसम्मको प्रदर्शन यस्तो छ ।
स्कटल्याण्ड र पपुवा न्युगिनीबिरुद्धको निराशाजनक प्रदर्शनसँगै नेपालले विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसीपको सुरुवात गरेको थियो । पहिलो चरणको दोस्रो खेलमा स्कटल्याण्डबिरुद्ध नौ विकेटले पराजित भएको बाहेक नेपालले अन्य सबै खेलहरुमा झिनो अन्तरको पराजय ब्यहोरेको थियो ।
तर घरेलु मैदानमा भएको प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा नामिवियाबिरुद्धको दुवै खेलमा जित र सिजनको अन्तिम खेलमा नेदरल्याण्ड्सबिरुद्धको जितसँगै प्रतियोगतिामा नेपाली टोलीको हौसला बढेको छ ।
श्रोतहरुका अनुसार आइसीसी, प्रतियोगिताको पाचौं चरणमा केन्याबिरुद्धको खेल नेपालमै खेलाउन इच्छुक देखिएको छ ।
युरोपियन टोली नेदरल्याण्ड्सले हिजो सोमबारसम्म प्रतियोगिताको कुनै खेलमा पनि पराजित हुनुपरेको थिएन । डच टोली अहिले शीर्ष स्थानमा छ । एक खेल कम खेलेको हङकङले आगामी नोभेम्बरमा केन्यासँग खेल्दैछ । यदि उसले दुवै खेलमा जित हासिल गरेको खण्डमा नेदरल्याण्ड्स प्रतियोगितामा दोस्रो स्थानमा झर्नेछ ।
सन् २०१७ को फेब्रुअरीदेखि सुरु हुने पाचौं चरणको खेलमा नेदरल्याण्ड्सले हङकङसँगै खेल्दैछ । नेपालले त्यस खेल नजिकबाट नियाल्नुपर्छ किनभने नयाँ सिजनको दोस्रो चरणमा नेपालले एशीयाली प्रतिस्पर्धीसँगै खेल्नेछ ।
जारी प्रतियोगितामा हङकङ, एकदिवशीय मान्यता प्राप्त चार टोलीमध्ये एक हो । हङकङ प्रतियोगितामा १ खेलमा मात्र पराजित भएको छ । त्यो पनि घरेलु टोली नामिवियासँग । अफि्रकी टोली नामिवियाका लेग स्पिनर निकोलास स्कोल्जले चार विकेट लिएपछि हङकङ त्यस खेलमा पराजय ब्यहोर्न बाध्य भएको थियो । तर दोस्रो खेलमा ८ विकेटको जित निकाल्दै हङकङले प्रतियोगितामा पुनरागमन गरेको थियो ।
हङकङले जितेका सबै खेलहरुमा प्रभावशाली प्रदर्शन गरेको छ । उसले बलियो स्कटल्याण्डलाई १०९ रनले हराएको थियो । उसले नयाँ सिजनको तयारीका लागि नोभेम्बरमा पपुवा न्युगिनीलाई सिरिज खेल्न हङकङ बोलाउँदैछ ।
आइसीसीबाट एकदिवशीय मान्यता पाएको अर्को टोली हो स्कटल्याण्ड । यो टोलीले युएईबिरुघ घरमै प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ र पहिलो खेलमा जित हासिल गरिसकेको पनि छ । उसले युएईलाई ९८ रनले हराएको हो । स्कटल्याण्डले अहिलेसम्म एउटाखेलमा मात्र पराजय ब्यहोरेको छ (हङकङसँगको १०९ रनको हार) । उसले पपुवा न्युगिनी, केन्या र नामिवियासँग खेल्न बाँकी छ ।
पिएनजीको टोलीले अक्टोवरमा नामिवियासँग् प्रतियोगिताको चौथो चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । साथै नोभेम्बरमा टोलीले हङकङसँग तीन एकदिवशीय शृङखला खेल्दैछ, तर यो आधिकारिक मान्यताप्राप्त शृङखला होइन । पिएनजीले घरेलु मैदानमा नेदरल्याण्ड्सबिरुद्ध मात्र खेलेको छ ।
केन्याले हङकङसँग नोभेम्बरमा खेल्नेछ । सन् २००३ को विश्वकपमा श्रीलंकालाई पराजित गरेपछि केन्याले विश्वस्तरमा चर्चा बटुलेको थियो । केन्याका तीव्र गतिका बलरहरुको प्रदर्शन राम्रो भइरहेको छैन । केन्याको, पिएनजी र युएईसँगको हारको मुख्य कारण फाष्ट बलरहरु चल्न नसक्नु नै हो । सन् २०१७ को अपि्रलमा केन्या नेपाल आउँने संभावना छ ।
अफि्रकी टोली नामिवियाले प्रतियोगितामा अहिलेसम्म एक खेलमा मात्र जित हासिल गरेको छ । लिगको दोस्रो खेलमा उसले घरेलु मैदानमा हङकङलाई हराउनुबाहेक अन्य खेल जितेको छैन ।
यो टोलीमा उत्कृष्ट ब्याटिङ लाइनअप छ तर उ प्रतियोगितामा जितका लागि तड्पिरहेको छ । प्रतियोगितामा उसको पुनरागमनको संभावना कम छ । उसले नेदरल्याण्ड्स र स्कटल्याण्डसँग खेल्न बाँकी छ ।
युएईले प्रतियोगिता अन्तर्गत अहिलेसम्म खेलेका ७ मध्ये ६ खेलमा पराजित भएको छ । उसले एकमात्र जित केन्याबिरुद्ध हासिल गरेको थियो । यो टोली अहिले स्कटल्याण्डको भ्रमणमा छ र पहिलो खेलमा ठूलो अन्तरको पराजय ब्यहोरेको छ । २०१६ को सिजन सकिन लागेको छ । आइसीसीले नयाँ सिजनका लागि प्रतियोगिताको खेलतालिका डिसेम्बरसम्म सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा छ ।